Akekho ongaba phikisana yokuthi ifenisha kokuzihlanganisa kuyabonakala umoya ahlukile. Elegant, enhle, okungavamile, kungaba kuphela lingachazwa ngokuthi into yomntakabani. Okunethezeka usebenzile yensimbi ifenisha - ke kuyinto efana tautology, ngoba openwork metal ekhaya impahla elite eqinisweni. Abantu ne ezintekenteke metal amatafula, izihlalo, SOFAS, imibhede, amawashi, emashalofini bezilokhu kubhekwe abacebile kakhulu.
Nakuba Yiqiniso, ngaphezu ukulondeka ngokwezimali kwakungenakwenzeka ukuba uqaphele obucayi ukunambitheka kwabo ngenxa yobuhle. Ngakho, yensimbi usebenzile ifenisha bekulokhu uphawu ukunambitheka.
Esikhathini sethu ku izihloko kokuzihlanganisa uthi konke befuna izingxenye edingekayo kubantu enu angaphakathi ukusheshe embukisweni amakhosi futhi uthole khona konke: metal izimbali, Horseshoes, izinsimbi, imifanekiso, ingasaphathwa izingcezu ifenisha.
Abakhandi bensimbi bazimisele ukusebenza oda, ikhumbula izifiso zakho ngesitayela (Baroque, Izwe, Gothic, Empire, zobuchwepheshe, yesimanje). Esebenzisa ukucabangela futhi indlu noma kaZuma yakho ezweni uyogcwala emaphethini emangalisayo metallic, lace inganekwane. Uyoba nomuzwa wokuthi okungenani elite, ngoba manje une le ifenisha ...
Yiqiniso, ifenisha kwensimbi has nezihibe, kodwa izinzuzo ukumboza konke. Kuyinto abandayo, kodwa enhle ngempela iyahambisana ezinye izinto, akulula okumele uyigibele (esindayo e isisindo kakhulu), kodwa cishe akunakwenzeka ukushaya kule okwakhe, kunzima, it is hhayi sognosh, kodwa unamandla futhi iqine. Ngaphezu kwalokho, naphezu kobukhulu yayo, ukudlula noma iyiphi enye, uyakwazi ukuletha isikhala umuzwa ukudlala futhi airiness, bakwazi ukumphakamisa iliphi igumbi.
Ake sicabange, uma unquma ukunikeza ngokuphelele efulethini lakhe elite usebenzile yensimbi ifenisha (Yiqiniso, ukukhuluma phambi kwalesi nge onguchwepheshe ingaphakathi). Ubungazizwa kanjani-ke bheka?
Ungena ephasishi, emi eceleni ebhentshini abakha elithambile, isihlalo ukhululekile, uhlanganyela esibukweni lace efulemini yensimbi. Kakade wadala umuzwa ukuthi abantu abavamile asiphili kule ndlu, ngokuqinisekile, nezihlakaniphi, mhlawumbe aristocrats - elite NGAMAFUPHI.
Qhubekela phambili. egumbini lakho lokuphumula lihlotshiswe elihle zensimbi embhedeni, ngokuphelele umphelelisi iziko ingaphakathi nge ekhandiwe Iron nehele, usebenzile yensimbi abanikazi ikhandlela, Iqhwa ezibucayana ama ukuthi ukulingisa amakhandlela, iwashi metal - konke lokhu njengoba isithombe umdwebi odumile noma inganekwane. Mhlawumbe umshini isikhathi uye wasidlulisela kwaze kwaba phakathi nekhulu phambi zokugcina?
Ekhishini, kufanele usebenzile etafuleni ne ingilazi phezulu nasemilenzeni obucayi, izihlalo kokuzihlanganisa ahlelwe eduze nayo. Cabanga indlela bekungaba kuhle kanjani ukuhlangabezana izivakashi itafula onjalo, labo abamenyiwe ukuhlela reception, zonke Uyozizwa endlwaneni eyakhiwe kwekhulu XIX. Kuyinto lezi amatafula once upon a time wayeya labasetulu Okuyınqo, ikhethelo umphakathi.
Emaqaqasini esibukweni lakho lokulala usebenzile okwaziyo okuhle nenhle isibani phansi zensimbi. Indawo udumo kuwufanele into ebaluleke kakhulu - emangalisayo ekhandiwe yensimbi embhedeni isitayela Baroque, okuyinto eye ezimbili backrest ehlotshiswe metal rose, amacembe kanye curls, nozimele onensika, okusaqanda (noma mhlawumbe oyindilinga noma unxande) Uhlaka. umbhede okahle okunjalo, elite. On lezi zinsalela ukulala amakhosi kuphela, akunjalo?
Ngenhlanhla, namuhla ungaziqhenya njengenkosi.
Kukhethwa ifenisha kokuzihlanganisa unothile ngokwanele - wonke umuntu angakwazi ukuthola okuthile ukunambitha yakho ephaketheni. Futhi siqala kusuka izinto ingaphakathi kokuzihlanganisa wena kuphela zezibane noma ozimele izithombe, akulimazi ukuphupha naphakade. Uma ufuna ukuletha ekuphileni tale lace inganekwane, kuyokwehlela kweqiniso, nawe nje uvumele ube Aristocrat.
Udizili particulate izihlungi. Ukuqokwa idivayisi, isimiso yokusebenza
EPriština - Kosovo inhlokodolobha